Politika · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Janoary, 2019
Afrika Mainty 28 Janoary 2019
Hanatontosa fifidianana ho filoham-pirenena i Nizeria amin'ny 16 Febroary 2019, ary mitodika amin'izany fifidianana izany ny maso rehetra amin'ny maha-fisedrana hanaporofoana ny tanjaky ny demokrasia, ny fenitra, ny soatoavina sy ny firaisankina ao Nizeria.
Afrika Mainty 25 Janoary 2019
Fantaro ireo kandidà ho filoham-pirenen'i Nizeria amin'ity taona 2019 ity
Afrika Mainty 23 Janoary 2019
Miainga ny hazakazaka hahazoana an'i Aso Rock — toerana misy ny prezidansa ao Nizeria. Fantaro ny kandidà ho filoham-pirenena 2019.
Afrika Mainty 20 Janoary 2019
Taonan'ny tolona ara-politika sy fanehoana firaisankina tsy nampoizina tao Amerika Latina
Amerika Latina 15 Janoary 2019
Fifidianana, fifindramonina, fanohanan'ny fiarahamonina sy ny tolona ara-tsosialy. Fanamby atrehin'ny Amerika Latina sy ny vahoakany.
Hetsipanoherana manameloka ny fanemorana indray ny fifidianana ao Thailand
Azia Atsinanana 15 Janoary 2019
Nitodika any amin'ny Tiwtter ireo mpianatra Thai ary ireo mpikatroka kosa nikarakara hetsipanoherana taorian'ny fanambaràna nataon'ny governemanta tohanan'ny tafika fa hoe hisy fanemorana hafa indray ny fifidianana.
Amerika Latina 14 Janoary 2019
Azia Afovoany sy Kaokazy 11 Janoary 2019
"Tsy nangina izy rehefa misy olona tsy sahy miatrika ny zava-misy. Nanao vivery ny ainy isan'andro izy ary nahafantatra ny hasarobidin'izany. "